I-China GRH Guorui Hydraulics, inkokheli kumaqonga omsebenzi womoya kunye noMthengisi | Guorui
Iqonga lomsebenzi wasemoyeni (i-AWP) luhlobo lwezixhobo ezizodwa eziyilwe zaze zaveliswa ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi wokuphakama okuphezulu. Inokuphakamisa abaqhubi, izixhobo, izixhobo, njalo njalo ngeqonga lomsebenzi liye kwindawo ebekiweyo yofakelo olwahlukeneyo, ukusebenza kwesondlo, kunye nokubonelela ngesiqinisekiso sokhuseleko kubaqhubi. Iqonga lomsebenzi wasemoyeni linoluhlu olubanzi lwezicelo ezisezantsi, kwaye lineempawu zetekhnoloji yemveliso enzulu kunye nexabiso eliphezulu elongeziweyo. Amanzi asezantsi ikakhulu abandakanya ulwakhiwo, ukwakhiwa kweenqanawa, ukuveliswa kweenqwelomoya, ukufakelwa kwesakhiwo sentsimbi kunye nolondolozo, umhombiso wokwakha kunye nokucoca, ubunjineli bemikhosi, ukugcinwa kwempahla kunye nolungiselelo, iinkonzo zesikhululo seenqwelomoya kunye nezikhululo kunye neminye imimandla.
Kwintengiso yamanye amazwe, eMntla Melika, eNtshona Yurophu naseJapan ngabona bavelisi baphambili beqonga lomsebenzi wasemoyeni. I-Terex kunye ne-JLG e-United States, i-Sky jack e-Canada, i-Haulotte e-France, kunye ne-Aichi eJapan zikhulu ngokomlinganiso, zikwindawo yesihlanu ephezulu kwihlabathi. Uxinzelelo lwe-AWP lwehlabathi luphezulu, kwaye iimveliso zasekhaya uDingli kunye neXingbang zikhula ngokukhawuleza. Kwi-2018, uDingli ubekwe kwindawo ye-10 emhlabeni, kwaye uHunan Xingbang weShishini eliNzima ubekwe kwindawo ye-19. Kwiminyaka yakutshanje, i-Lingong, i-Xugong, i-Liugong, i-Zhonglian kunye nezinye iinkampani ziye zonyusa i-R & D kunye neenzame zokwandiswa kweemarike, kwaye bakwisigaba sesibini seshishini. Kwixesha elizayo, njengoko isikali sentengiso siqhubeka nokwanda, iinkampani ezininzi zemveli ziya kuthi zikhukule kule ndawo. Kukho izinto ezahlukeneyo kukhuphiswano phakathi kweempawu zasekhaya kolu shishino.
Ukuphuhliswa kwamaqonga omsebenzi womoya e-China kusemva kwexesha, kwaye imakethi yasekhaya ayiyazi kakuhle le mveliso. Amaqonga omsebenzi womoya awasetyenziswa ngokubanzi. Inani elikhulu lomsebenzi we-eriyeli usalawulwa kukukora okanye ngokutshintsha indawo yeefolokhwe. Kwiimeko ezimbalwa, iqonga lide lifakwe ngaphezulu kwekhreyithi. Ibhokisi ukufezekisa injongo yokusebenza okuphezulu. Ngo-2018, inani lee-AWP e-China lalimalunga nama-95,000 eiyunithi, esisikhewu esikhulu xa kuthelekiswa neeyunithi ezingama-600,000 eUnited States kunye neeyunithi ezingama-300,000 kumazwe alishumi aseYurophu.
Ukusukela ngo-2013, i-AWP yasekhaya ine-avareji yokukhula komgangatho ngonyaka malunga neepesenti ezingama-45, kwaye isekwixesha lokukhula ngesantya esiphezulu. Nokuba kungokumalunga ne-inventri iyonke, uluhlu lomntu ngamnye okanye ukungena kwemveliso, kuqhutywa ngokhuseleko, uqoqosho kunye nokusebenza ngokukuko. Kwixa elizayo, intengiso ye-AWP yasekhaya ineendawo zokukhula eziphindwe ka-5-10 kwixesha elizayo.
Njengomboneleli obalaseleyo weqonga lomsebenzi wasemoyeni, iGuorui Hydraulics ibibandakanyeke ngokunzulu kweli candelo ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ukuxhotyiswa ngeempompo zegesi, ii-hydraulic cycloors motors, iiyunithi zamandla e-hydraulic, kunye neevaluva zolawulo lwe-hydraulic, kuphela komthengisi osebenzisanayo weqhinga le-Terex e-Asia. Uluhlu olupheleleyo lweemveliso zixhotyiswe ngabavelisi basekhaya nabangaphandle beqonga lomsebenzi wasemoyeni.
Imoto ye-hydraulic esetyenziswa ngokubanzi kwi-AWP yimoto yevili esetyenziselwa ukuqhuba ivili. Ilawulwa yedwa ziimpawu zangaphandle kwiminyaka yokuqala. UGuorui wazisa iitalente eziphezulu ekhaya nakumazwe aphesheya, ngokuzimeleyo baphuhlisa uthotho lwe-GWD, kwaye baphuhlisa idiski egcweleyo evaliweyo evaliweyo. Kwaye uhlobo oludityanisiweyo lwevalufa yempompo yesandla, emva kokuqinisekiswa zii-OEMs zasekhaya, ngoku yaziswa ngokupheleleyo kwimarike.
Ukuqaliswa kwemveliso entsha evela eGuorui hydraulic ...
Guorui ngesanti kubunzulu baphantsi (GRH) sweeper yaba shippe ...